Amaski aseBalinese | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Bali, Indonesia
Enye yezikhumbuzo zakudala ongaletha ekhaya kusuka ohambweni oluya e-Indonesia ngamamaski angajwayelekile.
Baziwa njenge- bus bus Futhi noma ungazithenga njengezikhumbuzo futhi uzilengise odongeni ekhaya lakho, zibaluleke kakhulu kusiko lalelo zwe. Ake sibheke imvelaphi yayo, ukusetshenziswa kwayo nezincazelo zayo ukuze singathengi lutho.
1 Umlando wamaski waseBalinese
2 Amaski aseBalinese namuhla
3 Amaski eTopeng
4 Amaski eBarong
Umlando wamaski waseBalinese
Amaski esetshenziswa emidansweni yendabuko yase-Indonesia ezivuselela izinganekwane ezikhuluma ngamaqhawe, izinganekwane, amakhosi nokuningi. Kukhona abadansi, abalingisi nabaculi esiteji futhi kukholakala ukuthi yize imidanso ingeyasendulo, ukusetshenziswa kwamamaski kuyo kwaqala ngekhulu le-XNUMX.
Bayabizwa i-topeng ngesi-Indonesian futhi ngokuhamba kwesikhathi asetshenziswe emidansweni yezwe nasemasikweni enkolo. Umsuka wawo usukela emuva emidansweni yezizwe zase-Indonesia, imidanso ehlonipha okhokho nonkulunkulu.
Ngokuhamba kwesikhathi labo ababemele izithunywa zonkulunkulu baqala ukugqoka imaski. Namuhla ungathola buso obenzelwe ezokuvakasha kodwa kunamamaski amaningi athathwa njengemisebenzi yobuciko futhi isigodi ngasinye saseBalinese sinesitayela saso.
Amaski aseBalinese namuhla
Yize kuliqiniso ukuthi isigodi ngasinye sinesitayela saso sokuzifihla ubuso IMas yidolobhana elidume ngokukhethekile kulo mkhakha wokubaza, ukubumba nokuhlobisa amaski.. Yindawo encane kepha imigwaqo yayo igcwele izitolo nezindawo zokusebenzela lapho zonke izitayela ezivela cishe kuyo yonke i-Indonesia zenziwa futhi zithengiswe.
Kulezi zingxoxo zokufundisana kwenziwa imaski yesimanjemanje, yendabuko, ethe xaxa, enemibala emincane. Kuyo yonke into. Eqinisweni, kukhona abaseduze Amathuluzi ahlukene angama-30 ukudweba isisekelo sokhuni lwesifihla-buso. Le nkuni ingaba izinkuni ze ukunxanela, of ukulala, of i-hibiscus noma ube yi-teak noma i-mahogany.
Amaski amaningi aseBalinese enzelwa imicikilisho eyenzeka emathempelini, kulawo madanso angcwele ahlabayo futhi amahle alandisa izindaba ezimnandi zenkolo yamaHindu, imijikelezo yokutshalwa kwelayisi, ukunqoba kokuhle phezu kolwandle noma impilo uqobo.
Ukukhiqiza kuyinto oyifunda enkosini futhi ubuciko bunjalo wadlula esizukulwaneni ngesizukulwane. Umbazi waziwa ngegama lika undagi ikhava futhi uma leso buso siqeda ithempeli, kufanele futhi ukuthi sibe yilungu lesigaba seBrahman ngoba kungaleso sikhathi kuphela lapho sazi khona imicikilisho ebandakanyekile ekwenziweni kwesifihla-buso esingcwele.
Sekungamakhulu eminyaka imaski yaseBalinese inezindawo, amathempeli nemikhosi yezwe, kepha kusukela lapho Ngawo-60, i-Indonesia yayiqondiswe iso lezokuvakasha izinto zomhlaba wonke zishintshile. Izivakashi zaqala ukuba nentshisekelo kumaski futhi bazithenga ukuhlobisa izindlu zabo.
Kwakukhona izitayela eziningi kakhulu, ubuso obuningi nemibala eminingi kakhulu etholakalayo kangangokuba umqondo wokuziqoqa noma ukulengiswa kaningana odongeni lwangaphakathi waba ofiseleka kakhulu. Kwakuyimfashini futhi empeleni kwakuyinto esentshonalanga kakhulu kusukela lapho akwenzeki kwabaseBalinese ukulengisa lezi zimaski odongeni.
Kubantu abakule ngxenye yomhlaba, izifihla-buso zaseBalinese zingcwele ngakho-ke kungaba yisono ukuzibonisa ngaphandle kwethempeli. Yini enye, Noma nini lapho zingasetshenziswa, zigcinwa esikhwameni sikakotini ngaphakathi kwethempeli elihlala kuzo..
Uma uya kwaMas uzobona ukuthi kuzo zonke izitolo kuyathengiswa izitayela ezine zobuso: buso besizwe samaBalinese, izifihla-buso zabantu, izifihla-buso zezilwane (amakati, amaxoxo) nezimonyo zikankulunkulu noma zamademoni okungahle kube okuphelele noma okuyingxenye kuye ngomdanso ezisetshenziswa kuwo.
Ekhuluma ngemidanso, buso busetshenziswa kakhulu kufayela le- imidanso IBarong y ITopeng lapho bekopisha ukunyakaza kwe-Wayan kulit. Imidanso yeTopeng ixoxa izindaba zabantu abahloniphekile, yamakhosi nezindlovukazi, futhi ingahlekisa noma iqukathe imibuzo ethile noma imfundiso yokuziphatha, kanti iBarong ihlala igxila empini phakathi kokuhle nokubi, uBarong noRangda.
Zisetshenziswa kuphela ngabesilisa futhi laba badansi-abalingisi abayisebenzisi eyodwa kuphela phakathi nomdanso wonke kodwa basebenzise eziningana. Kwesinye isikhathi kuba yifayela le- imaski yonke, uma kungukubonakaliswa kwesicukuthwane noma inkosi futhi kwesinye isikhathi basebenzisa i- imaski uhhafu noma enye ehlekisayo noma ekhombisa ukuhlanya uma bemele abalingiswa bamahlaya noma ama-clown noma uma, njengoba kwenzeka, kumayelana nokususa izifo.
Ngakho-ke, singakhuluma nge- ITopeng Kras, umlingiswa onegunya elikhulu, ITopeng Isi-Tua, ikhehla elihlekisayo amahlaya alo nokwenziwa kwawo kuhlose ukujabulisa abalaleli kanye ITopeng Limnandi, iqhawe elingenakuphikwa.
Kukhona umlingisi ozigqokile oxoxa indaba enemaski phakathi, emvumela ukuba akhulume, kwesinye isikhathi kuba nababili balaba balingisi, bese kuba nabadansi, abanye balwa nabalingisi abakhulumayo nabangakhulumi. Yonke indawo yemizwa yomuntu imelwe lapho.
Futhi kukhona "amamodeli" amaningana kodwa okuthandwa kakhulu yimaski yenyathi, yengulube neyengonyama. Banamazwi ahlekisayo futhi banezindlebe eziqoshiwe noma amakhala.
Sishilo ngaphambi kwalokho imidanso IBarong zimayelana nokulwa okuhle nokubi, kankulunkulu uBarong ngokuyisisekelo ngokumelene nonkulunkulu uRangda. Ngemuva kwalokho i- imaski Isi-Rangda Zimelela udeveli futhi zinamazinyo, amehlo aqhakazile, nolimi olukhulu nolwesabekayo.
Uma uthola noma imuphi wale maski amabili, aqoshwe kahle, zingabiza ama-euro angamakhulu ambalwa ngoba yizona ezithatha isikhathi eside ukuqedela. Umbazi angachitha cishe izinyanga ezine esemsebenzini, kanti imaski yezokuvakasha ithatha cishe izinyanga ezimbili noma ngaphansi.
Futhi-ke, isikhathi esincane somsebenzi siholela entengo ephansi kepha izinto zabo nazo zishibhile ngoba azidwetshiwe futhi imibala yesimanje kakhulu.
Uma ufuna okuthile okulula nokunikezwa njengesipho noma njengesikhumbuzo esilula futhi esingabalulekile kangako, kufanele ukhombe la maski akamuva, kepha uma okwakho kungubuciko noma ukuqoqa, bhekisisa leyo mininingwane.
Imvunulo ehambisana nezifihla-buso nayo inendawo yayo Futhi zingabiza ngoba wonke umuzi ubamba iqhaza ekukhiqizweni kwawo futhi lokho kudinga isikhathi nezinto zokwakha ezibandakanya uboya bamahhashi, isikhumba senyathi noma isikhumba sembuzi, amazinyo ezilwane futhi, wonke amadayi avela emvelweni.
Ngakho-ke, lapho uya kule ngxenye yomhlaba futhi imidanso namaski awo kuyakumangaza, kufanele ukhumbule izinto ezimbalwa ukuze ungabuyisi into ebolile kakhulu: hamba uye edolobhaneni laseMas, uzulazule emigwaqweni yawo futhi Izitaladi, funa indawo yokusebenzela ehehayo nokuthi uthisha usebenza kuyiphi, khuluma naye, ubone ukuthi usebenzisa amathuluzi amangaki nesitayela somsebenzi wakhe.
Futhi ukujabulela amaski aseBalinese!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Bali » Amaski aseBalinese
Amabhishi amahle kakhulu eMarseille